पशुपति शर्मा, कमला घिमिरे र मेनुका परियारको पहिलो गीत दाँते ओखर – Onlines Time
पशुपति शर्मा, कमला घिमिरे र मेनुका परियारको पहिलो गीत दाँते ओखर
December 26, 2020 onlinestimeLeaveaComment on पशुपति शर्मा, कमला घिमिरे र मेनुका परियारको पहिलो गीत दाँते ओखर
कुरो ७१ वर्ष बूढो असारको हो । रुकुम तुसेराबाट छक्कालै १५ वर्षको एकजोर कलिला गोडा आफूजस्तै ‘सङ’ सँग नाना, दाजु, काकु र पागुका गोडा पछ्याउँदै भोटे नुन लिन उकालिन्छ । भाषाविद् डेभिड वाटरले तुसेरामै बसी लामो समय मगर खाम/पाङ भाषा अध्ययन गरेका हुन् ।
हो, उही तुसेराका दुई दर्जन जतिको हटारु त्यो हूलले ठूलोखर्क काट्छ । धुरी चढ्छ । उनाम ओर्लन्छ । त्यसपछि ? पिल्मा तर्छ । हूल उकाएर मैमा बास बस्छ । जंगलैजंगल उकालो बाटो रिजा, डुले पुग्न पश्चिमोत्तर लाग्छ । नैताले हुँदै झन्डै दुई घण्टा उकालिन्छ । बल्ल हटारु हूल सिङखोला पुग्छ ।
हटारु हूल सिङखोला ओडारमा बास बस्छ । गाउँछन्– घरी ‘नानी लै’ त घरी ‘स्यानिमाय’ । बाटोमा वा बासमा भेटिने अन्य गाउँका हटारुसित पनि यिनै लोकभाका गाउँछन् । मेलापातमा मात्र होइन, नुन हाटका अप्ठेरा बाटो पनि ‘गीत गोडा’ ले छिचोल्छन् ।
वर्षको एकपालि अर्थात् बर्खातिर हटारु हिँड्ने नुने बाटो हो यो । त्यसैले बाटोको नाउँ मात्र छ । नियमित नहिँड्ने बाटोको हाल कस्तो हुँदो हो ? हो, हटारु हिँड्दा बनेको दुब्लो बाटो हो, जसको यो पनि बाटो हो भन्ने ‘बाटोको अङ्ङे’ मात्र छ । तिनै नाम मात्रको बाटोमा उकालिँदै हटारु हूल ३९५० मिटर अग्लो पुपाल पुग्छ । डोको बिसाउँछ । पसिना ओभाउँछ ।
पाका हटारु भन्छन्, ‘अब उछट्टे नाच । सबभन्दा पहिले फिरी नाच् ।’
फिरीसहित छ जना पहिलोपालि नुन हाट हिँडेका हटारु हुन् । पहिलोपालि जानेलाई उछट्टे भन्छन् भने तिनलाई नचाउनुलाई उछट्टे नचाउने । पाका हटारु नानाभाँती गीत गाउँछन् । गाउन लगाउँछन् । छचनिन्छन् । र, उछट्टेलाई नाच्न लगाउँछन् ।
उछट्टे नाचेको तालमा हटारु हूलबाट खित्का छुट्छ । उछट्टे नचाएपछि हटारु तन र मन भुर्र उड्लाजसरी चंगा हुन्छ । नाचगानपछि हिँडेको हटारु हूलले अर्बिजा काट्छ । पुर्बाङखोला पुग्छ । उकालिएर ठाङ्ङेको जङ्ला पुगेर वारिपारि आँखा डुलाउँछ । रुकुम–डोल्पाको त्यो सीमामा हूलले पसिना पनि ओभाउँछ ।
जङ्लाबाट ओरालिएको हटारु हूलले बल्ल रिम्नामा सानीभेरी भेट्न हतारिएको ठूलीभेरी वल्लोपट्टिको गाउँ भेट्छ, जुनबेला सूर्यले त्यस दिनका लागि बिदा मागिसकेको हुन्छ ।
हटारु भन्छन्, ‘आइपुगिम्, तारभोट !’
आफ्नो ‘र्‍याङ’ को घरमा हटारु हूलले नुन बोक्ने भारेडोका (सानो प्वालवाल चोयाको डोको) बिसाउँछ । मडुस (काठको बाकस) भरि नुनै नुन देखेर उछट्टे आँखा झन् ‘हलाक्’ हुन्छन् ।
भोलिपल्ट नुन बोकेर हटारु हूल चुइचुइ घरतिर लाग्छ ।
जाँदा या फर्कंदा, रोल्पाको थबाङसहित रुकुमका कारी, कोल, रासी, मई, लुगुम, उनाम, मैका हटारुसँग भेट हुन्छ । कुनैसँगै बासमा त, कुनै गाउँका हटारुसँग बाटोमा ।
तपाईंलाई लाग्यो होला, यो के हटारु किस्सा हो ?
यो त वाग्मती भेट्न हतार गोदावरीखोलासँगै बगेको फिरी बुढामगर (८५) को स्मृतिखोला हो । गोदावरी किनारको टिनछाने टहराभित्र बग्दै ७१ वर्ष पुरानो उही ताराभोट पुग्छिन् । अचेल त सपनामा समेत जान छाडेको ताराभोटको पानीफोटो सम्झेर फिरीले लामो सास फाल्छिन्, ‘फेरि ताराभोट जान यो जुनीमा त कहाँ लेखेको होला र !’ ताराभोटमा अचेल न हटारु लर्को छ न छार्काभोट जाने चौंरीको । न जडानबाट खसान र खसानभन्दा पनि झन औल ओर्लने जाक्ना, घोडा र खच्चरको लर्को लाग्छ ।
फिरीहरू पनि कहिले भोटे नुन लिन ताराभोट पुग्छन् त कहिले छार्काभोट । सायद रोल्पा, रुकुमतिरका हटारुले छार्काभोटजस्तै भोट सम्झेर ताराकोटलाई नाम दिए होलान्, ताराभोट । बमकुमारी बुढामगरका अनुसार खस राज्य विस्तारअघि १८ मगरातको एक राज्य हो, ताराकोई । र, खस–नेपालीकरण तथा हिन्दूकरणपछि ताराकोई हुन्छ, ताराकोट ।
ताराभोट भनिने हिमाली उपत्यका हो, जसलाई मानवशास्त्री जेम्स एफ फिसरले नाम दिएका छन्, तिचुरोङ । त्यहाँ ताराकोटसहित गुम्बातारा, तुम्तारा र सहरतारा गरी १९ गाउँ छन् । अहिले डोल्पा जिल्लाको काइके गाउँपालिका हो । तिचुरोङवासीलाई तराली मगर (जनसंख्या ३७१८ जसमा काइके भाषी १२२६ र पोइके (तिचुरोङके) भाषी २४९२) भन्छन् ।
सुजित मैनाली (१३ भदौ, २०७७, कान्तिपुर कोसेली) लेख्छन्, ‘नरेन्द्रदेवको पालामा भोटसँगका हिमाली नाकाहरू सहज भएपछि उकालिएको व्यापार मल्लकालसम्म चरमचुलीमा पुगेको थियो ।’ त्यसताका नेपालले किन्ने मुख्य सामान नुन हो । त्यसपछि ऊन अनि सुन । सन् १९६० अघिसम्म तिब्बत सीमाका विभिन्न नाका हुँदै नेपाली भान्सा–भान्सामा भोटे नुन पुग्छ ।
तरालीसहित हिमाली भेगका भोट–बर्मेली भाषा परिवारका विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायले चौरी, झोपा, च्याङ्ग्रा, चेल, घोडा र खच्चरमा अन्न लदाएर तिब्बत लान्छन् । अन्नसँग भोटे नुन साटेर फर्कन्छन् । कर्णाली र भेरीतिरको कुरा गर्ने हो भने, तिनै नुन लिएर कर्णाली र भेरी नदी किनारैकिनार ओर्लन्छन् । भोटे नुन लिएर अन्न साट्न सुर्खेत, नेपालगन्ज पुग्छन् । जाक्ना (भेडा/बाख्रा) भग्रीहरू भोटे नुन बोकेर राजापुर पुग्छन् । टनकपुर पुग्छन् ।
हुम्ली अनुसन्धाता दीपेन्द्र रोकायाअनुसार, भारतमा अंग्रेज उपनिवेश नहुँदासम्म भोटे नुन लखनउसम्म पुग्छ । नुने बाटा नै विश्वका धेरै देशमा मोटर तथा रेलमार्ग बनेका छन् । उपल्लो डोल्पा, हुम्लाका अन्न तथा नुन ओसारपसार गर्ने नुन बाटो त अन्तर्राष्ट्रिय नुने बाटो हुन् भनिन्छ ।
तरालीसहित भोटवर्मेली परिवारको भाषा बोल्ने समुदायको पकडमा रहन्छ, भोटे नुनको व्यापार । यसको मूल कारण हो, तिनका लागि भाषा र भूगोल अनुकूल हुनु । तिनले खसानतिरको खस नेपाली पनि जान्दछन् भने भोटको तिब्बती पनि । अनुसन्धाता एवं हुम्ली सांसद छक्कबहादुर लामाका अनुसार उत्तर र दक्षिणमा नुन, ऊन र अन्न विनिमयको गज्जबको व्यापार चलेको हुन्छ, कर्णालीमा ।
लामा थप्छन्, ‘नेपालमा सुनजस्तै मूल्यवान भोटे नुन व्यापारबाट सिंगो कर्णालीले सास फेर्थ्यो ।’ भोटे नुन पांग्राले कर्णालीसहित हिमाली लोकजीवनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गाडी गुडेको हुन्छ । पश्चिममा भोटे नुनको मूलथलो पुराङबास (ताक्लाकोट) हो भने तिनका मूल नुन हाट यलबाङ (हुम्ला) र सिंजा (जुम्ला) ।
फिरीहरू ताराभोट नुन हाट जाँदा तराईका विभिन्न भागमा भारतीय नुन केन्द्र बनिसकेका हुन्छन् । जसमा मुख्य नुनथलो सुदूरपश्चिममा महेन्द्रनगर, मध्यपश्चिममा नेपालगन्ज, अझ मध्यभागमा बटौली (बुटवल) र पूर्वमा धरान हुन् । फिरीहरू भारतीय नुन लिन कोइलाबास जाने क्रम जुन गतिमा बढ्छ, त्योभन्दा पनि तीव्र गतिमा घट्छ, भोटे नुन लिन ताराभोट जाने सिलसिला ।
हटारुले आफ्ना भान्सामा नुन लिन ठूलो जोखिम मोल्छन् ।
चलचित्र कथा खोज्दै म्याग्दी गुर्जा हिमालमुन्तिर पुगेका फिल्म निर्देशक अनिल बुढामगर सुनाउँछन्, ‘भोटे नुन लिन जाँदा कोदालो, बेल्चा र कात्रो लिएर जान्थे रे ।’ हिउँले पुरिएर या लडेर मर्ने हटारुलाई बिदा गर्न कात्रो सामा गरी नुन हाट गएका हुन् ।
रुकुम गोतामकोटका कमारा विष्ट (८८) ले (पोहोर वैशाख…) भोटे नुन लिन जाँदाको सम्झना सकस सुनाएका छन्, ‘पैतला अडिने ठाउँ कोदालोले खन्दै जान्थ्यौं । तल हेर्‍यो, आँखा मन्कने भेरी, माथि पहरा । सातोपुत्लो उतै छाडेर आउँथ्यौँ ।’
स्याङ्जामा अनौ*ठो घ*टना ! १२ वर्षकी बालीका पानीको ड्रम भित्र | घरह*स्यमय बन्यो घटना (भिडियो हेर्नुहोस्)
७ बर्ष लामो प्रेम सम्बन्ध पछि अन्त**रजातिय बिहे गरेको बहिनीको आ*फ्नै दाइले गरे ह**त्या। दिनेश र सकुन्तल
चार छो’रा’छोरी सहित आ’मा कर्णालीमा : चारको श’व भेटियो, पाँच वर्षी’या छोरी अझै बेप’त्ता (भिडियो हेर्नुहोस)
March 11, 2021 onlinestime
आज ११ गतेका मुख्य समाचार | केपि ओलिले दिए राजिनामा, कोरो*ना खो*प,नेपाल ब*न्द हुने,खाने तेल
December 26, 2020 December 26, 2020 onlinestime
सचिनलाई भेट्न अाइन् पुगिन् आमा काठमाडौं विगतका कुराले चल्यो रु वा वासी छोरा छोरी सँगै बस्नु मन छ (भिडियो हेर्नुहोस)
April 18, 2021 onlinestime